Instrument Factory - China Instrument Vagadziri, Vatengesi
Simbisa mune mashoma mavhoriyamu ivhu pane saiti kuvandudza yekutarisa kunzwisisika. Inobudirira kuunganidzwa kwehutachiona hutachiona, hutachiona, hutachiona, kuumbwa, mukume, spores, nezvimwewo. Uchishandisa tsika uye mamorekuru biology nzira dzekuona kuti unyatsoona iyo yakaunganidzwa microbial aerosols
GENECHECKER akagamuchira yakasarudzika polymer chip (Rapi: chip TM) iyo inogonesa kunyangwe nekukurumidza kupisa kwemafuta esampuli mairi kupfuura iyo kesi yekushandisa PCR machubhu eakajairwa PCR Instruments. 8 ° C / sec ramping chiyero chinogona kuwanikwa
Chuangkun Biotech's CHK-16A ndeyemhando yepamusoro yakazara otomatiki nucleic acid yekubvisa-system, diki muhukuru, uye inogona kuiswa pabhenji rakachena kana mumotokari yekuyedza nhare; inogona kuendeswa nebhatiri rekunze kwekuyedza-saiti;